१. ऑइस्टर सिंहावलोकन
२. ऑइस्टर पेप्टाइड भनेको के हो?
O. ऑयस्टर पेप्टाइड कार्यहरू र फाइदाहरू
Sexual. अन्य यौन संवर्धन उत्पादनहरूसँग तुलना गर्दा कम्तीमा पेप्टाइड फाइदा के हुन्छन्?
Ys. कसरी ऑइस्टर पेप्टाइड पाउडर लिने? ऑयस्टर पेप्टाइड खुराक?
Ys. ऑइस्टर पेप्टाइड साइड इफेक्ट?
O. ऑइस्टर पेप्टाइड पाउडर अनुप्रयोग?
Fin. अन्तिम शब्दहरू
ओइस्टर, एक समुद्री जनावर जुन कस्तुनी निकाल्ने पाउडरको लोकप्रिय स्रोत हो, धेरै शताब्दियौंदेखि धेरै व्यक्तिहरूका लागि स्वादिष्टता हो। तपाईं यसलाई कच्चा वा पकाएर खान सक्नुहुन्छ। तपाईले जे पनि विकल्प छनौट गर्नुभयो, ऑयस्टर मासुले तपाईको शरीरलाई पोषक तत्वहरूको एरेसँग आपूर्ति गर्दछ। पोषक तत्वहरूमा प्रोटीन, स्वस्थ बोसो, खनिज साथै भिटामिनहरू समावेश छन्।
यस मासुको लागि अर्को प्लस यो हो कि यो क्यालोरीमा कम छ।
त्यहाँ धेरै उत्पादनहरू छन् जुन ऑयस्टर मासुबाट निकाल्न सकिन्छ, तिनीहरूमा सीस्टर पेप्टाइड एक हो। यस समीक्षामा, हामी अन्य सम्भावित लाभहरूका साथै, कस्तूरी बायोएक्टिभ पेप्टाइडहरू र पुरुष समारोहमा उनीहरूको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।
ऑइस्टर पेप्टाइड भनेको के हो?
ऑइस्टर पेप्टाइड मल्टी-चरण बायोटेक्नोलजी मार्फत ऑयस्टर मांस प्रोटीनबाट निकाल्ने एक प्राकृतिक पूरक हो। पेप्टाइड जिंक, क्याल्सियम, टाउरीन, साथै भिटामिन ए, बी १, बी २, बी,, सी, डी र ई मा समृद्ध छ। त्यस्तै, यसलाई स्वास्थ्य खाना वा कार्यकारी खानाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मानिसहरुमा विशेष गरी यौन स्वास्थ्य मुद्दाहरु को लागी पुरुषहरु बीच स्वास्थ्य लाभ को एक श्रृंखला छ।
ऑइस्टर बायोएक्टिभ पेप्टाइड्ससँग अन्य सामान्य कस्तूरी उत्पादनहरूको तुलनामा उच्च जैविक क्षमता हुन्छ। यसका साथै, कस्तूरी पेप्टाइडको अझ महत्त्वपूर्ण शारीरिक क्रियाकलाप छ। अझ राम्रो, सामान्य कस्तूरी उत्पादनहरूको विपरीत, ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर राम्रो स्वाद छ र एक माछा गन्ध छैन।
ऑयस्टर पेप्टाइड कार्यहरू र फाइदाहरू
ऑयस्टर पेप्टाइडसँग निम्न कार्यहरू र फाइदाहरू छन्:
कस्तूरी पेप्टाइडले दिएको टॉरिनले व्यक्तिमा पित्तको स्राव सुधार गर्न सक्छ। थप रूपमा, कस्तूरी व्युत्पन्नले तटस्थ तथ्य संचय रोक्न सक्छ वा कलेजोमा सञ्चित फ्याटलाई मेटाउन सक्छ। दुबै प्रकार्यात्मकताले लिटरलाई यसको डिटोक्सिफिकेसन कार्यमा समर्थन गर्दछ।
यौन समारोह सुधार
ऑयस्टर पेप्टाइड आर्जिनिन र जस्ता तत्वहरूमा समृद्ध हुन्छ, ती दुबै व्यक्तिको यौन स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यसले प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्रोजेन सहित यौन हर्मोनको उत्पादनमा सहयोग गर्दछ।
सौन्दर्य समर्थन गर्दछ
जब तपाईं नियमित रूपमा कस्तूरी पेप्टाइड पाउडर लिनुहुन्छ, तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि तपाईं दिनदिनै सुन्दर वा सुन्दर बन्नुहुनेछ। यो किनभने यसले तपाइँको शरीरलाई पोषण प्रदान गर्दछ जसले तपाइँको छालाको मेटाबोलिज्मलाई बढावा दिन्छ, यसले स्वस्थ र राम्रो हाइड्रेटेड देखिन्छ।
यस बाहेक, यस प्राकृतिक पाउडरमा छाला मेलेनिन अपघटनलाई बढावा दिने कम्पोनेन्टहरू छन्। नतिजाको रूपमा, तपाईंको छालाको टोन सुधार र अझ बढी बन्छ। थप रूपमा, पेप्टाइडमा समावेश भएको आयोडिन र ट्रिप्टोफेनले तपाईंको कपाललाई कालो बनाउँदछ, यसकारण अझ सुन्दर हुन्छ।
राम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली
तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीको स्वास्थ्य तपाईंको भलाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो एक हो जुन तपाईंको शरीरलाई विभिन्न संक्रमण र रोगहरूबाट बचाउँछ। जिंक मुख्य कुञ्जीहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली यसको काममा मजबूत र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ।
भाग्यवस, ऑयस्टर पेप्टाइडले तपाइँको शरीरलाई दाँतको मात्रा जस्ता आपूर्ति गर्दछ जुन प्रतिरक्षा प्रणालीले जारी राख्न र खतरनाक भाइरस र ब्याक्टेरियालाई खाडीमा राख्नु पर्छ। थप रूपमा, पेप्टाइडले थाइमस ग्रन्थिले थाइमुलिनको उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ। सुधारिएको थाइमुलिन उत्पादनले अझ राम्रो टी-सेल र T4 मद्दत गर्ने सेल नियमनमा पुर्‍याउँछ, परिणामस्वरूप बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली हुन्छ।
केहि रोगहरू र स्वास्थ्य सर्तहरू तपाईं लिनबाट बच्न सक्नुहुन्छ ऑयस्टर पेप्टाइड समावेश:
फ्रि-र्याडिकल क्षति रोक्दछ
पेप्टाइड्स सहित ऑइस्टर अर्कहरूमा एन्टिऑक्सिडन्टहरू हुन्छन् जसले शरीरको कोशिका र ऊतकों लाई उमेर बृद्धि गर्नेबाट बचाउँछ ओक्सीडाइटी तनाव.
थकान कम गर्नु
ऑयस्टर पेप्टाइडमा एमिनो एसिड पनि हुन्छ, जसले कलेजोको कार्य सुधार गर्ने बाहेक, ल्याक्टिक एसिडको जमिनलाई रोक्न सक्छ। थप रूपमा, एसिडले शारीरिक र मानसिक थकान राहतमा मद्दत गर्दछ। यसले व्यक्तिलाई थप बल प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ र तनावपूर्ण अवस्था वा बिरामीपना पछि सफा र ताजा दिमाग प्राप्त गर्दछ।
Oyster पेप्टाइड मानिस को लागी लाभ
यौन समारोह मुद्दाहरूको साथ पुरुषहरू कस्तूरी पेप्टाइडबाट धेरै फाइदा लिन सक्दछन्। यसमा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता, डिस्टेंड्ड प्रोस्टेट वा जननेन्द्रिय हाइपोप्लासिया भएका पुरुषहरू, अन्य पुरुष रोगहरू र सर्तहरूको माझमा पर्छन्। ऑयस्टर पेप्टाइडले उनीहरूको यौन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्छ।
कस्तूरी पेप्टाइडको यौन स्वास्थ्य सुधार क्षमताको पछाडिको शक्ति यसको उच्च जस्ता सामग्री हो, यो विचार गरेर कि कस्तूरी जिंकको सबैभन्दा धनी स्रोत हो। कस्तूरीमा जिंक सामग्री रातो मासुको भन्दा दश गुणा बढी छ।
वैज्ञानिक रूपमा, जिंक एक व्यक्तिमा नि: शुल्क टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढाउन प्रमाणित भएको छ। अर्कोतर्फ, जिंक अभाव पुरुष यौन समस्याहरू जस्तै इरेक्टाइल डिसफंक्शनको प्रमुख कारण हो। यो किनभने पुरुषमा टेक्स्टेरोन उत्पादन गर्न र पुरुषमा माध्यमिक वर्णहरू कायम राख्न तिनीहरूसँग पर्याप्त जिंकको अभाव छ। प्रायः जसो कम टेस्टोस्टेरोनको अनुभवले कम कामवासना र यौन प्रदर्शन हुन्छ।
जिंकको अलावा, कस्तूरी निकासीमा भिटामिन डीको एक उच्च मात्रा पनि हुन्छ, अर्को पोषक तत्व जसले मानव शरीरलाई थप टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। यसले मांसपेशिको बल र संरचनामा सुधार गर्दछ।
यस बाहेक, कस्तूरा पेप्टाइड आर्जिनिन, ट्रेस एलिमेन्ट्स र सेलेनियम समृद्ध हुन्छ, यी सबैले स्पर्म उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। परिणाम स्वरूप, एक मानिस जसले यो ऑयस्टर उत्पादन प्रयोग गर्दछ त्यसले प्रजनन क्षमतामा सुधार ल्यायो।
त्यसोभए, जब एक व्यक्ति लिन्छ ऑयस्टर पेप्टाइड, उसको टेस्टोस्टेरोन र शुक्राणु उत्पादन स्तर बढ्छ, जसले गर्दा उसको यौन स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ। सामान्य शरीर शक्ति र टेस्टोस्टेरोन बढेको कारण, मानिस छिटो र बढी कामवासना गर्न सक्षम छ। साथै, ऊ लामो समयको लागि इरेक्शन कायम गर्न सक्छ।
यौन डिसफंक्शन र नपुंसकता बाहेक, बढेको प्रोस्टेट र जननेन्द्रिय हाइपोप्लासिया जस्ता पुरुष स्थितिको लागि पनि एक प्रभावकारी उपचार हो। यही कारणले गर्दा ऑयस्टर अर्कहरू, विशेष गरी कस्तूरी पेप्टाइड, सयौं बर्षदेखि पुरुषहरूको बीचमा प्रयोग हुँदै आएको छ - पुरुषको यौन स्वास्थ्य प्रबर्धनको लागि।
ऑयस्टर पेप्टाइड खुराकको एक खुराकको प्रभाव सातदेखि दश दिनसम्म रहन सक्छ। यसको मतलब यो हो कि एक व्यक्तिले दैनिक रूपमा पूरक लिनु हुँदैन यसको यौन सुधार लाभबाट फाइदा लिन। करीव १२ घण्टा पूरक पछि, एक मानिस बढी ऊर्जावान र यौन सेट मा राख्न एक आग्रह गर्न लाग्छ।
ऑयस्टर पेप्टाइड महिलाहरूको लागि लाभ
ऑयस्टर पेप्टाइडको प्रमुख लाभहरूमध्ये एक हो शरीरको समग्र शक्ति सुधार। त्यस्तै रूपमा, जब कुनै महिलाले एन्टेरपार्टम वा प्रसव-दुबै कमजोरी अनुभव गरिरहेकी छिन् भने यसले पूरक लिन्छ।
थप रूपमा, पुरुषहरू जत्तिकै, महिलाहरूले पनि कस्तूरी पेप्टाइड पछाडि राम्रो स्वास्थ्य स्वास्थ्य अनुभव गर्दछन्। महिलाको शरीरले टेस्टोस्टेरोनहरू पनि उत्पादन गर्दछ तर अण्डाशयमा।
यद्यपि, रजोनिवृत्ति भएका महिलाहरूले सामान्यतया हर्मोनको स्तर कम गरेको हुन्छ र यसको परिणाम स्वरूप उनीहरूले कम कामवासना र योनि सुख्खा अनुभव गर्दछन्।
भाग्यवस, ऑयस्टर पेप्टाइडले जिंकको थप आपूर्तिले रजोनिवृत्ति महिलाको टेस्टोस्टेरोनको स्तर बढाउँदछ। यसको परिणाम एक बढ्दो सेक्स ड्राइभ र उत्तम 'lubricated' योनी हो। त्यस्तै, उनी उत्तम यौन संभोगको आनन्द लिन सक्नेछिन्।
अन्य यौन संवर्धन उत्पादनहरूसँग तुलना गर्दा ऑस्टर पेप्टाइड फाइदा के हुन्छन्?
धेरै भन्दा मन नपर्ने यौन वृद्धि उत्पादनहरू, कस्तूरी पेप्टाइडको साइड इफेक्ट हुँदैन किनभने यो सबै प्राकृतिक हो। यस बाहेक, एक लाई दैनिक आधारमा लिनुपर्दैन, किनकि यो केहि अन्य यौन बृद्धि हुने उत्पादनहरूको साथ हो। एकल ऑयस्टर पेप्टाइड खुराकको प्रभाव लगभग सात देखि दस दिनसम्म रहन सक्छ।
ऑयस्टर पेप्टाइड एक्स्ट्र्याक्ट प्रक्रिया
कस्तूरीको मासुबाट ऑयस्टर पेप्टाइड निकाल्नको लागि निम्न चरणहरू छन्।
चरण एक: क्याल्शियम नुन द्वारा मासुको उपचार गर्दै
कस्तूरीको मासु क्याल्शियम नुन र पानीसँगै जमिनमा छ। यो एक कस्तूरी मासु घोलमा परिणाम। यो चरण कस्तूरीमा रहेको अन्तर्जात एन्जाइमहरू सक्रिय र रिहा गर्ने उद्देश्यले हो। नतिजा, आगामी enzymatic hydrolysis मा शामिल enzymatic तयारी कम छ।
चरण २: एन्जामेटिक हाइड्रोलिसिस
चरण एकमा उत्पादन गरिएको कस्तूराको मासु घोल इन्जाइमेटिक हाइड्रोलिसिसको अधीनमा छ। यो one 35 डिग्री सेल्सियस 45 50 डिग्री सेल्सियसको घोललाई लगभग एक वा दुई घण्टाको लागि हलचल गरेर हासिल गरिन्छ। त्यसोभए, एउटा तटस्थ प्रोटीन एन्जाइम वा एउटा अल्कालाइन प्रोटीज स्लरीमा थपिन्छ। तापक्रम about० देखि °० डिग्री सेल्सियसमा हाइड्रोलिसिसन for देखि hours घण्टा सम्म जारी राख्नको लागि समायोजित गरियो।
त्यस पछि, पीएचलाई .5.0.० बाट .5.5..XNUMX मा समायोजित गरिएको छ, स्वाद प्रोटीज थपियो र त्यसपछि इन्जाइमेटिक हाइड्रोलिसिसलाई थप दुई वा तीन घण्टासम्म जारी राख्न अनुमति दिइन्छ। त्यसो भए, परिणामस्वरूप सतह सतहलाई क्रूड कस्तूरी तरल पदार्थको लागि केन्द्रित गरिन्छ।
चरण:: Decolorizing र परिष्कृत गर्दै
सक्रिय कार्बन चरण दुईमा प्राप्त कच्चा ऑइस्टर तरलमा थपियो। मिश्रणa45 डिग्री सेल्सियसदेखि ° 55 डिग्री सेल्सियस 30० देखि minutes० मिनेटसम्मको तापक्रममा हलचल हुन्छ। त्यसो भए, यो डेकोलोराइज गरिएको छ र सिरेमिक झिल्लीको साथ फिल्टर गरिएको छ। परिणामस्वरूप फिल्टररेट हामी त्योलाई ऑयस्टर पेप्टाइडको शुद्ध समाधानको रूपमा बुझ्छौं।
चरण:: एकाग्रता र स्प्रे-सुकाउने
शुद्ध कस्तूरी पेप्टाइड समाधान कम से कम 35 solid% ठोस सामग्री भ्याकुम कन्सर्टेशनको माध्यमबाट केन्द्रित हुन्छ। यो त्यसपछि स्प्रे-सुक्खा छ ठोस कस्तूरी पेप्टाइड उत्पादन गर्न को लागी राम्रो स्वाद छ र छैन कि भयानक माछा गन्ध छ।
कसरी ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर लिने? ऑयस्टर पेप्टाइड खुराक?
तपाईंसँग लिनका लागि दुई विकल्पहरू छन् ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर। पहिले एक बोतलमा यसलाई हल्लाउँदैछ पानीको उचित मात्रा भएको र मिश्रण पिईरहेको छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं यसलाई सुख्खा लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईंको पेटमा डुबाउनको लागि केही पानी पिउन सक्नुहुन्छ।
ऑयस्टर बायोएक्टिभ पेप्टाइडहरूको लागि कुनै निश्चित खुराक छैन। यद्यपि, केही चिकित्सकहरूले सिफारिस गरेको औसत रकम mg०० मिलिग्राम हो, दिनमा तीन पटकसम्म लिन्छ। जे होस्, किनकि यो एक प्राकृतिक र सामान्यतया सुरक्षित आहार पूरक हो, तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरू अनुसार डोजलाई माथि वा तल समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
ऑइस्टर पेप्टाइड साइड इफेक्ट
ऑयस्टर पेप्टाइड वा कस्तूरी पेप्टाइड एक्स्ट्र्याक्टको कुनै वैज्ञानिक-प्रमाणित साइड इफेक्टहरू छैनन्। यो मुख्य कारण किनभने उत्पादन पूर्ण प्राकृतिक हो, कुनै हानिकारक कृत्रिम योजक वा अवयव सहित।
जहाँसम्म, समुद्री खाना एलर्जीको साथ मानिस कस्तुनी निकाल्ने पछि केही स्वास्थ्य समस्याहरूको अनुभव गर्न सक्दछ। तसर्थ, समुद्री खाना एलर्जीबाट ग्रस्त व्यक्तिले पेप्टाइडसहित ऑयस्टर उत्पादनहरू त्याग्नु पर्छ।
साथै, पूर्व अवस्थित स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई कस्तूरी उत्पादनहरू लिन थाल्नु अघि उनीहरूको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्न सल्लाह दिइन्छ। यसले उनीहरूलाई सम्भावित प्रभावहरू हटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ जुन ऑयस्टर एक्स्ट्र्याक्ट र उनीहरूले लिने अन्य ड्रग्स बिचको अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुन सक्छ।
यस बाहेक, केहि बाहिर निस्किरहेको स्वास्थ्य अवस्था शरीरमा अतिरिक्त जिंक आपूर्ति संग खराब हुन सक्छ।
ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर अनुप्रयोग
यसको औषधीय प्रभावको कारण, ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर स्वास्थ्य सेवामा लागू गरियो। उदाहरण को लागी, क्लिनिक महत्वपूर्ण डाटा को कारण एक मानिसको सीरम प्रमाणित गर्ने कस्तूरीहरु को क्षमता को पुष्टि, यौन स्वास्थ्य समस्याहरु संग धेरै पुरुष उत्पादन प्रयोग गर्दछ।
थप रूपमा, प्राकृतिक पाउडर रक्त लिपिडको नियमनको लागि र प्लेटलेट एकत्रीकरणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो hyperglycemia लक्षण, कम प्रतिरोधक क्षमता वा कम मेटाबोलिज्म भएका मानिसहरूलाई पनि सिफारिस गरिन्छ किनकि यसले स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्दछ।
क्यान्सर भएका व्यक्तिहरूले पनि रोगको उत्तम व्यवस्थापनको लागि पाउडर लिन सक्छन्। कस्तूरी उत्पादनले क्यान्सर कोषहरूलाई फैलिनबाट रोक्न सक्छ। पाउडर घाउ निको पार्ने र हृदय सिस्टोलिक बल प्रभाव सुधारको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडरको अन्य अनुप्रयोगहरू:
विरोधी तनाव लाभ
फोरस्किन ग्रन्थि विस्तार गरीएको उपचारको रूपमा
अत्यधिक बुढाई रोकथाम
यसबाहेक, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ऑयस्टर पेप्टाइड पाउडर खाना योजकको रूपमा। यसले राम्रो स्वाद लिन्छ र केहि समुद्री खाना उत्पादनहरू जस्तो 'फिसी' गन्ध हुँदैन। यस बाहेक, यो पौष्टिक तत्वहरुमा धनी छ जुन तपाईको शरीरलाई स्वस्थ हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै, यो तपाइँको साधारण भोजन को लागी एक राम्रो पूरक हुन सक्छ।
ऑयस्टर पेप्टाइड्स, कस्तूरीको अर्कहरू धेरै सुरक्षित पूरकहरू हुन् जुन विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा फाइदाहरू भनेको पुरुष समारोह सुधार हो। यी पेप्टाइड्सले कम सेक्स ड्राइभ भएको पुरुषमा कामवासना बढाउन सक्दछ र बाँझपनका समस्या भएका पुरुषहरूको लागि शुक्राणु गणना। कम सेक्स ड्राइभ र योनीको सुख्खा अनुभव गरिरहेका Menopausal महिलाहरूले पनि ऑयस्टर पेप्टाइड एक्स्ट्रक्टबाट महत्त्वपूर्ण लाभ लिन सक्दछन्।
चेन, डी, लियू, जेड, हुआंग, डब्ल्यू। झाओ, वाई, डो Dong, एस, र जेen्ग, एम (२०१ 2013)। ऑयस्टर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेटबाट जिंक-बाध्यकारी पेप्टाइडको शुद्धिकरण र विशेषता। कार्यात्मक फूडहरूको पत्रिका, 5(2), 689-697।
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (२००)) एन्टिऑक्सिडिभ ​​पेप्टाइडको सुरक्षात्मक प्रभाव कस्तूरी गीगा मुक्त कट्टरपन्थी प्रेरित डीएनए क्षति बिरुद्द कस्तूरी ग्याग्रास्ट्रो डाइजेस्टबाट शुद्ध। बायोसोर्स टेक्नोलोजी, 99(9), 3365-3371।
उमायापर्वती, एस, मीनाक्षी, एस, विमलराज, भि।, अरुमुगम, एम।, शिवगामी, जी, र बालासुब्रमणियन, टी। (२०१ 2014) एन्टिऑक्सिडन्ट गतिविधि र एन्टिसेन्सर प्रभाव बायोएक्टिभ पेप्टाइडको एइजाइमेटिक हाइड्रोलाइजेट ऑयस्टरबाट (Saccostrea cucullata)। बायोमेडिसिन र बचाव पोषण, 4(3), 343-353।
जियाओचुन, XiaO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, र वाह, सी (२०१))। अमेरिकी पेटेन्ट आवेदन नम्बर १ 15/542,743 XNUMX२,XNUMX।.
जेen्ग, एम।, कुई, डब्ल्यू। झाओ, वाई, लियू, जेड, डो Dong, एस, र गुओ, वाई (२०० 2008)। ऑयस्टरबाट एन्टिभाइरल सक्रिय पेप्टाइड। चिनियाँ जर्नल अफ ओयनोलजी र लिम्नोलोजी, 26(3), 307-312।